Kutheni kungekho 777 ye-P3D V4?
umbuzo Kutheni kungekho 777 ye-P3D V4?
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #894 by Josh13215
Kuze kube ngumhla andinako ukufumana ukungena kwe-777 yokusebenza ye-P3D V4. Kuza kuba 'akukho mboniso kuqala' okanye ayixhasi i-P3D V4. Ngaba kukho nabani na osebenzayo nge-777 add-on yeV4?
Ndiyabulela kwangaphambili uGuy
Enkosi nalamkelayo: 18
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #896 by Gh0stRider203
Oku kuye kwambalwa amaxesha ambalwa ngaphambili. I-Lot of aircraft ayiyi kusebenza kunye ne-P3D V4 njengoko ayilungiselelwe, okwamanje. Nantsi imicu emibini ndayifumana ...
Ngumnini / CEO
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #899 by Josh13215
Ixesha ukwenza page: 0.203 imizuzwana